Fampiharana 3 handaminana ny asanao | Bezzia
Fampiharana 3 handaminana ny asanao
Maria vazquez | 13/10/2021 10:00 | Vehivavy mpanatanteraka
Na miasa ivelan'ny trano ianao toy ny hoe mandefa telework ianao Azonay antoka fa hankasitraka ny fahafantarana ireo rindranasa arosonay anio handaminana ny asanao ianao. Ary izany ve maro ny asa sahirana ataontsika isan'andro Ary tsy manana fitaovana mety foana hanaovana an'izany isika.
Ny fandaminana ny lahasa isan'andro, ny fitantanana ny tetikasa ary ny fanapariahana ny asa amin'ny fizarana asa amin'ny mpiara-miasa hafa dia zavatra iray izay ho mora kokoa aminaofangatahana handaminana ny asanao izay miresaka aminao anio. Azonao atao koa ny mametraka azy ireo amin'ny findainao, ny solosainanao ary ny iPad-nao, hahazoana fampiononana bebe kokoa. Jereo izy ireo!
Todoist dia fitaovana fitantanana asa Miaraka amina endrika tsotra izay manampy anao hamerina ny fahazavanao sy ny fiadanan-tsainao amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo asa rehetra tsy ho hitanao ao anaty lisitra na aiza na aiza misy anao na fitaovana ampiasainao.
Ity dia kalandrie feno, lisitry ny laharam-pahamehana ary fanamarihana feno izay manome anao fitaovana tsy manam-petra handaminana ny asanao sy ny hetsika ataonao. Azonao atao ny manasokajy azy ireo amin'ny alàlan'ny tetikasa, ny mari-pahaizana sy ny ambaratonga laharam-pahamehana, ary koa ny fanomezana azy ireo ny daty na fe-potoana voatondro raha toa ka asa miverimberina izy ireo. Ka hanana hevitra mazava momba ny zavatra rehetra tokony hataonao amin'ny fotoana rehetra ianao ary tsy ho hadinonao mihitsy ireo asa lehibe indrindra.
Amin'ity fampiharana ity dia azonao atao koa ny manatsotra ny fomba fiasa miasa mampifandray izany amin'ny rakitrao, mailaka ary kalandrie. Ity fampiharana ity dia manampy anao amin'ny fitantanana tetikasa lehibe amin'ny alàlan'ny famelana anao hizara azy ireo sy hanome andraikitra ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa hafa. Mizara sy mandresy ny asanao isan'andro amin'ny tetikasa iraisana!
Ny ankamaroan'ireo fiasa ireo dia misy maimaim-poana, fa afaka mahazo ireo mahasoa hafa ianao fisoratana anarana amin'ny kaonty Pro (€ 3 / volana) na orinasa ho an'ny ekipa (€ 5 / volana). Ireo dia manolotra anao avy amin'ny sivana manokana mankany amin'ny maodelin'ny tetikasa sy ny statistikan'ny famokarana, ankoatry ny lafiny hafa.
Mahay mandanjalanja sy mahazo aina, Evernote dia hanampy anao hitantana sy handamina ny asanao. Amin'ny alàlan'ity fitaovana ity dia azonao atao ny mamorona lisitra ataonao manokana, manondro fotoana fanendrena amin'ny kalandrie, vondrona ary maka sary amin'ny endrika samihafa ary koa manaova nomerika ny rakitrao amin'ny alàlan'ny fakantsary avy amin'ny telefaona findainao.
Mba hahatonga ny fampiasana ny fampiharana hampahazo aina anao kokoa, azonao atao ampifandraiso ilay kaonty Evernote mitovy amin'ny fitaovanao samihafa: finday, solosaina ary takelaka. Amin'izay ianao dia hitahiry ny fampahalalana manandanja foana eo an-tanan'ny rantsan-tananao: ny taratasinao dia ampifanarahana ho azy eo amin'ny fitaovanao rehetra. Fanamarihana, teny an-dalana, izay ahafahanao manampy lahatsoratra, sary, feo, scan, rakitra PDF sy antontan-taratasy.
Mamorona sy manome andraikitra ao anatin'ny naotinao miaraka daty voatondro, fampandrenesana ary fampahatsiahivana mba tsy hisy hialana aminao ary hampitombo ny vokatrao! Azonao atao izany miaraka amin'ny drafiny maimaim-poana na mampiasa ny drafitra Personal na Prefessional anao, ho an'ny € 6,99 sy € 8,99 isam-bolana.
Trello dia fampiharana taloha ho an'ny fitantanana tetikasa izay nanjary nifandray tamin'ny zava-bitan'ny telecommuting. Ny lisitra sy ny karatra no andrin'ny fandaminana izay iankinan'ny tabilaon'ity fampiharana ity.
Manendre asa, mametraha fe-potoana, zahao ireo masontsivana momba ny famokarana, apetaho ny kalandrie ary zavatra maro hafa hahitanao ny fizotran'ny asa nohatsaraina. Ny karatra Trello dia mitovy amin'ny fandaminana, raha mamela mitantana, manara-maso ary mizara asa hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Sokafy ny karatra rehetra hahitanao ny tontolo iainana ny lisitra fanamarihana, daty voatondro, fampidirana, resaka ary maro hafa.
Na dia mpikarakara manokana aza i Trello, dia ampiasaina amin'ny ekipa izy io. Araho maso ny asan'ny ekipanao miasa ary afaka mahita ny fomba fifindran'ireo karatra eo amin'ireo mpikambana samihafa mandra-pahavitan'izy ireo dia zavatra azonao atao na dia amin'ny kaontinao maimaimpoana aza. Fa raha mila bebe kokoa ianao dia azonao atao ny manakarama ny drafitra Premium ho azy ireo, ekipa olona hatramin'ny 100 tsy maintsy manara-maso tetikasa maro.
Na miasa amin'ny olon-kafa ao amin'ny birao ianao na avy any an-trano, toy ny hoe miasa tena na tsy miankina. Ireo rindranasa handaminana ny asanao ireo dia afaka manamora ny andavan'andro. Ary samy intuitive daholo izy rehetra, andramo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Vehivavy mpanatanteraka » Fampiharana 3 handaminana ny asanao
Ahoana ny fomba fanaovana peel tarehy sy tarehy tsara ao an-trano
Inona ny microbiota amin'ny tsinay? Torohevitra 3 hanatsarana azy